FXCC $ 50 Free - Fehezan-dalàna ankapobeny | FXCC
Manaiky ianao fa amin'ny fandraisana anjara amin'ity fanolorana ity ("Fanolorana"), dia ho voafatotr'ireo fepetra sy fepetra ("Terms") sy ny fepetra ankapobeny izay ampiharina amin'ny kaontinao ara-barotra.
Ity fampiroboroboana ity dia manan-kery hatramin'ny 31st of December 2018. (Nofoanana ny fampiroboroboana)
Ity tolotra ity dia misy vaovao ireo mpanjifany voasoratra anarana izay mamita ny fanamarinana ny kaonty sy mametraka fangatahana amin'ny alàlan'ny FXCC Trader Hub - Bonus Section ("Mpifanaraka tsara").
Ny FXCC, indraindray, dia manolotra ny $ 50 Free - Start-up Bonus ho an'ny mpanjifa (s) tahaka ny FXCC, araka ny fahamendrehany irery ihany, fa mety.
Mpanjifa azo ekena ( ao anatin'ny 24 ora fiasana amin'ny fotoana izay handefasana ilay fangatahana $ 50 Free - Start-up Bonus ) ny $ 50 Free - Start-up Bonus izay voarakitra ao amin'ny kaonty manokan'ny mpanjifa tsy mila fangatahana fanonerana avy amin'ny Client.
Ny mpividy rehetra nahazo alalana dia nahazo alalana handray ny $ 50 Free - Start-up Bonus indray mandeha monja tsy miankina ny isan'ny kaonty mifandraika amin'ny mpizara amin'ny FXCC.
Bonus iray (1) iray isaky ny tokantrano. Ny famandrihana maromaro avy amin'ny adiresy IP sy / na ny fisoratana anarana maromaro miaraka amin'ny antsipiriany manokana ihany no tsy azo atao. Raha toa ka misy tombontsoa marobe hita ho an'ny mpividy iray (na raha misy ny ahiahiana toy izany, anisan'izany ny adiresy IP adiresy, ny antsipiriany momba ny antsipiriany, sns), dia hofoanana daholo ny bonus rehetra, hofoanana ny tombony, ary ho voasakana ny kaonty voarohirohy.
Ny fampiasam-bola be indrindra amin'ny kaonty mandray anjara amin'ity tolotra ity dia 1: 100.
Ny $ 50 Free - Start-up Bonus dia ampidirina amin'ny kaontin'ny kaomionan'ny mpanjifa ho karama, ity $ 50 Free-Start-up Bonus ity dia natao ho an'ny antony ara-barotra sy ny $ 50 Free - Bonus start-up tsy azo alaina. Na izany aza, ny tombony natao tamin'ny fampiasana ny $ 50 Free - Start-up Bonus dia azo alaina avy amin'ny kaonty taorian'ny varotra efatra (4) ary ny tombony dia mahatratra $ 50.
Ny tombony farafahakeliny amin'ny fampidirana ny Bonus Start-up izay azon'ilay mpanjifany misintona raha tsy misy ny fametrahana voalohany dia $ 50 ary tsy misy afa-misintona afa-tsy amin'ny Skrill na Neteller.
Tsy misy komisiona avy amin'ny mpiara-miasa no omena amin'ny hetsika ara-barotra natao tamin'ny $ 50 Free - Start-up Bonus raha tsy najanin'ny mpanjifa voalohany. Ny kaomisionan'ny drafitr'asa dia azo aloa amin'io soso-kevitra io raha tsy ny fampidirana ny mpanjifany no mametraka ny tahiry voalohany farafahakeliny. Ny famindrana vola eo anelanelan'ny kaonty dia tsy raisina ho toy ny fametrahana voalohany.
Ny $ 50 Free - Start-up Bonus dia azo ampiasaina amin'ny banky ara-barotra ary azo alaina ao amin'ny kaontin'ny komity mpanjifa Kalandrie 15 androany hatramin'ny daty nahazoana ny $ 50 Free - Start-up Bonus. Aorian'io daty io, ny $ 50 Free - Start-up Bonus sy ny tombontsoa tsy misy tombony (raha misy) dia hesorina ao amin'ny kaonty. (Jereo ny hevitra 8 & 9 noho ny fepetra takian'ny fidiram-bola).
Ny $ 50 Free - Start-Up Bonus dia tsy azo alefa amin'ny kaonty ara-barotra hafa.
Ny FXCC dia tsy tompon'andraikitra amin'ny antso na fatiantoka marobe, anisan'izany fa tsy voafetra ho amin'ny fatiantoka noho ny Stop-out Level, raha toa ny $ 50 Free-Start-up Bonus dia nesorina noho ny antony rehetra mifanaraka amin'ny fepetra sy fepetra voatondro ao.
Ny FXCC dia mitazona ny zo hanafoana ny Bonus nomena amin'ny fomba tokana ihany, tsy misy antony tokony hanomezana fanamarinana na fanazavana ny anton'izany fihenana izany.
Ny FXCC dia miaro ny zo, amin'ny fahamendrehany irery ihany, tsy ahafahan'ireo olona mandika ny fepetra tolotra sy / na fehezan-dalàna FXCC.
Ny endriky ny fanodikodinana na ny endrika hafa amin'ny fanaovana asa mamitaka na fisalasalana any amin'ny kaonty ara-barotra mpanjifa na mifandraika amin'ny fifandraisana amin'ny $ 50 Free - Startup Bonus dia hitarika amin'ny fanafoanana ny Tolotra ho an'ity olona manokana voakasika amin'izany asa izany.
Ny fifanolanana rehetra, ny fandikana ny fampiharana ireo fepetra sy fepetra voalaza etsy ambony, ary ny tsy fisian'ny tolotra sy fepetra voalaza etsy ambony, ny fifandirana toy izany na ny tsy fisian'ny interpretation dia hamaha ny FXCC araka ny fomba fijery azy ho tsara indrindra ho an'ny rehetra. Io fanapahan-kevitra io dia ho farany sy / na hanekena ny mpandray anjara rehetra. Tsy hisy taratasy fangatahana hiditra ao.
Ny FXCC dia mitazona ny zo, satria izy irery ihany no mihevitra fa mety, hanova, hanitsy, hampiato, hanafoana na hamarana ny tolotra, na ny lafiny rehetra amin'ny Tolotra, amin'ny fotoana rehetra amin'ny alalan'ny fampitandremana amin'ny alàlan'ny mailaka amin'ny alàlan'ny "Online Trading System" na amin'ny alàlan'ny mailaka na amin'ny fametrahana fampandrenesana ao amin'ny tranokalanay. Miezaka manome anao telo minitra (3) andro farafahakeliny ny tatitra momba ny fanitsiana tahaka izany raha tsy hoe tsy mahomby firy ho antsika izany.
Ny Client dia raisina ho toy ny fanekena ny fanovana raha tsy ampahafantarin'ny mpanjifa ny orinasa fa ny Client dia tsy manaiky ny fanovana sy ny faniriany hanafoana ny tolotra. Ny mpanjifa dia tsy maintsy mandoa fiampangana vokatry ny famaranana amin'io tranga io, ankoatra ny sandam-bola andoavam-bola azo omena ho an'ny Sampana atolotra hatramin'izao.
Raha tsy misy ny toe-javatra, ny FXCC dia mety ho tompon'andraikitra amin'ny fiovana rehetra, ny fanitsiana, ny fampiatoana, ny fanafoanana na ny fampitsaharana ny fampiroboroboana.